Sunday, November 4, 2007 Wednesday, April 1, 2015 Douglas Karr
Nchịkọta Google nwere njirimara mara mma, ikike iji soro nyocha ọchụchọ n'ime saịtị gị. Ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ na blọọgụ WordPress, enwere ụzọ dị mfe iji melite Google Analytics Site Search:
Họrọ saịtị gị na nchịkọta Google ma pịa Dezie.
Nyagharịa ka echiche nke ị chọrọ melite n'Searchntanet Search.
Pịa Lee Ntọala.
N'okpuru Ntọala Ntọala Ntọala, tinye Ndepụta Nchọgharị Saịtị na ON.
Na mpaghara ajụjụ ajụjụ, tinye okwu ma ọ bụ okwu ndị na-egosi oke ajụjụ nyocha, dị ka “okwu, ọchụchọ, ajụjụ”. Oge ụfọdụ mkpụrụedemede bụ naanị mkpụrụedemede, dịka “s” ma ọ bụ “q”. (WordPress bụ “s”) Tinye aka na mpaghara ise, nkewapụrụ site na commas.
Họrọ ma ịchọrọ Google Analytics ka ị wepu ihe nyocha na URL gị. Nke a na-ewepu naanị ọnụọgụ ndị ị nyere, ọ bụghị mpaghara ọ bụla ọzọ n'otu URL ahụ.
Họrọ ma ị na-eji otu, ma ọ bụ na ị na-eji edemede, dị ka menu adaala iji mezie nyocha saịtị.
Tags: google analytics nyocha saịtịnyocha saịtị googlenyocha saịtịịchọ ọchụchọ
Aga m anọ na nnọkọ na Nzukọ TechPoint na Fraịdee
Nov 5, 2007 na 2:31 AM
Daalụ maka n'ọnụ, dị na-emejuputa atumatu!
Nov 5, 2007 na 12:44 PM
Onye oma, Doug! Amaghị m na nke a dị.
Aug 11, 2010 na 12:05 PM
Daalụ maka Ndụmọdụ! M arụnyere na nke a ụbọchị ole na ole gara aga na-ejighị n'aka nke search parm na bụ na-eche ihe mere na ọ naghị akuko ma. I kwuru okwu abụọ!
Ọkt 8, 2011 na 7:57 PM
Daalụ maka ozi ahụ, emere m nke ahụ! 🙂
Enwekwara ngwa mgbakwunye SiteMeter, ị nwere ike iji hụ ụdị isiokwu na ugboro ole ka achọgharịrị na blọọgụ gị